म गर्भावस्था को समयमा प्रेस डाउनलोड गर्न सक्छन्: सबै "फाइदा" र "बुरा"
खेल र फिटनेस, फिटनेस
धेरै expectant आमा अक्सर सोध्छन्: "यो सम्भव छ गर्भावस्था को समयमा वा प्रेस डाउनलोड गर्न," तपाईं थाह छ, धेरै डाक्टर बलियो पेट मांसपेशीमा निकै प्रसब को प्रक्रिया सरल तर्क। तथापि, गर्भावस्था पहिला यो व्यावहारिक कसैले सोच्छ, तर expectant आमा को धेरै अवधिमा यस्तो विचार देखा पर्न थाल्छन्। यस लेखमा हामी तपाईँलाई विषय रुचि राख्नुहुन्छ विवरण लेगी प्रयास गर्नेछ।
यो एक गर्भावस्था योजना बनाउँदा सम्भव छ प्रेस स्विंग?
बलियो पेट मांसपेशीमा - यो गर्भावस्था को समयमा बढ्दो गर्भाशय लागि राम्रो समर्थन छ। तपाईं यदि लामो समय प्रेस हलचल मच्चाएका, र त्यसपछि थाले , एक गर्भावस्था योजना तपाईं मात्र लोड कम त्यसपछि यो आवश्यक छैन अप सम्पूर्ण दिन। यो एक दैनिक व्यायाम गर्न यो समयमा मनमोहक छ। प्रशिक्षण बारे मात्र 15 मिनेट पछिल्लो गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले नियमित हुनुपर्छ। यो तपाईं, फलस्वरूप, तयारी बिना एक प्रेस स्विंग उहाँको फिर्ता समस्या हुन सक्छ सक्नुहुन्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक पनि छ। यो कोच संग परामर्श मा, भुँडी को मांसपेशिहरु मा लोड कम गर्न र व्यायाम संग यो ज्यादा छैन, आवश्यक छ।
गर्भावस्था को के अवधिमा तपाईं प्रेस डाउनलोड गर्न सक्छन्?
निस्सन्देह, हामी यस अवधिमा हरेक महिला विभिन्न तरिकामा ठाउँ लिन्छ कि बिर्सनु हुँदैन, त्यसैले पहिलो कुरा तपाईं एक डाक्टर वा प्रशिक्षक यस क्षेत्रमा माहिर जो परामर्श गर्न, र यो तपाईं को लागि गर्भावस्था को समयमा प्रेस स्विंग गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र तपाईं खेती सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो दुई वा तीन महिनामा यो अवधि responsibly आफ्नो पेट को हेरचाह गर्न आवश्यक छ रूपमा प्रेस, गर्भावस्था को समयमा डाउनलोड गर्न निषेधित छ। तथ्यलाई यस समय भ्रूण राज्य को अवधारणा मा अझै पनि छ र धेरै सुरक्षित रूपमा गर्भाशय संलग्न छैन भन्ने छ, त्यसैले तपाईं साँच्चै आफ्नो पेट रक्षा गर्न आवश्यक छ। र placenta को चौथो महिना यसको गठन सुरु, त्यसैले यो अवधि पहिले नै सम्भव छ बिस्तारै पेट मांसपेशीमा लोड गर्न। तथापि, तपाईं कडाई गर्ने supine स्थिति तल्लो पेट स्विंग निषेध गरिएको छ के जान्नु आवश्यक छ। पनि रक प्रेस धेरै ध्यान दिएर, बिस्तारै र अनावश्यक तनाव बिना भूल छैन।
कसरी गर्भावस्था बेला अभ्यास गर्न?
सबै को पहिलो, तपाईं एक पेशेवर प्रशिक्षक, सल्लाह गर्ने कुरा गर्नुपर्छ, के स्थिति राम्रो तपाईं को लागि चयन गर्न छ। सामान्य अवस्थामा पनि safest निम्न अभ्यास हो:
पछिल्तिर सार्न एक बसिरहेका स्थिति (तपाईं कुर्सी मा तल बस्न सक्नुहुन्छ)। तपाईँले फिर्ता यसको मूल स्थिति आफ्नो पेट मांसपेशिहरु मा तनाव, महसुस रूपमा।
एक कुर्सी, लिफ्ट र कम खुट्टा मा बसेर।
व्यवसायी यो पहिलो skirmishes तपाईं आराम गर्न मद्दत गर्नेछ भविष्यमा रूपमा कक्षाहरू, fitball चयन गर्न सल्लाह।
कुनै पनि मामला मा तपाईं यसलाई आफ्नो शरीर गरेको प्रतिक्रिया ध्यान छैन असंभव छ व्यायाम भने। यो सास को गर्भावस्था को समयमा प्रेस, हृदय दर, shortness दुख्छ भने, वा केही कमजोरी छ, यसलाई तुरुन्तै व्यायाम रोक्न आवश्यक छ। यसलाई तपाईं प्राप्त छैन यो अवधि पछि क्याच रूपमा, सुरु गर्न तपाईं पूर्व-अवधारणा खेल मा लगी भएको छ भने, यो राम्रो छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक पनि छ। र तपाईं लामो समय हो भने खेल मा लगे, तपाईं त, केवल एकदम लोड सुख गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ यो अवधिमा आफ्नो डाक्टर कुरा छ।
म गर्भावस्था को समयमा प्रेस डाउनलोड गर्न सक्छन्: contraindications
तपाईं कुनै पनि व्यायाम कार्यक्रम प्रदर्शन गर्नु अघि, तपाईंको स्त्रीरोग विशेषज्ञ सल्लाह लिनुहोस्। डाक्टर मात्र होइन सल्लाह र तपाईं को लागि लोड वितरण, तर पनि यो तपाईं को लागि गर्भावस्था को समयमा प्रेस स्विंग गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन, र कि भनेर लागि कुनै contraindications छन्। सबैभन्दा खतरनाक कारक समापन को खतरा छ, त्यसैले एक छ भने, यो सारा अवधिको लागि कुनै पनि भार परित्याग गर्न आवश्यक छ। यो कारण हुन सक्छ को गर्भाशय को एक वृद्धि टोन, तल्लो पेट क्षेत्र र spotting दुखाइ। डाक्टर रोक्न वा व्यायाम अप्ट आउट गर्न आग्रह भने, यो सुन्न बिल्कुल आवश्यक छ। हामी वजन कम गर्न र मांसपेशी टोन सुधार गर्न डिजाइन जो लोड, गर्भावस्था को समयमा कडाई contraindicated छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
जवान आमा को लागि केही सुझाव
भारी आफ्नो शरीर लोड र निरन्तर असम्भव छ गर्भावस्था को समयमा खेल मा संलग्न। भ्रूण विकास अवधि मा विश्रामहरू लिन निश्चित हुनुहोस्। त्यहाँ को महत्वपूर्ण अवधि हो गर्भावस्था, सामान्यतया 12-13, 20-24 र 28 हप्ता। यस समयमा यो शारीरिक गतिविधि को कार्यान्वयन रोक्न र पनि तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन राम्रो छ। त्यहाँ यो तपाईं को लागि गर्भावस्था को समयमा प्रेस स्विंग गर्न सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न slightest जवाफ कम्तीमा केही अनिश्चितता छ भने, यो expectant आमा बच्चालाई स्वास्थ्य केहि भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर सम्झना हुनुपर्छ किनभने, त्यसो नगर्न राम्रो छ। यो अवधिमा केही हदसम्म कुनै पनि शारीरिक गतिविधि, खतरनाक हुन सक्छ र बच्चा लागि अपरिवर्तनीय हानि, त्यसैले यो एक हजार पटक सोच्न र सबै उत्तम बारेमा खेद वजन छ। को पाठ्यक्रम, सुरक्षा जन्म पछि अवधिको लागि व्यायाम स्थानान्तरण गर्न छ।
मारिया Tskiriya - सबैभन्दा लोकप्रिय फिटनेस मोडेल
कसरी आफ्नो घर छोडेर बिना गधा माथि पंप?
Postural प्रशिक्षण के छ। postural मांसपेशीमा को प्रशिक्षण। शुरुआती लागि व्यायाम
वृद्ध लागि बिहान व्यायाम: सुविधाहरू, व्यायाम, नियम र निर्देशन
"स्वास्थ्य भूमि" को Ilyushin मा: सेवा, वास्तविक मूल्य
मूर्ति भनेको के हो: मूर्तिकलामा यो दिशाको विशेषता विशेषता
कार्गो जहाज र आफ्नो वर्गीकरण
परियोजना छोडेर पछि जीवनी, परिवार र जीवन: को "घर-2" Aliana Gobozov को पूर्व सदस्य
40 हप्ता गर्भवती: को पल्ट कल गर्न कसरी? गर्भावस्था को 40 औं हप्ता मा जन्म
"Nikofleks": समीक्षा। "Nikofleks" - बाह्य प्रयोगको लागि मलम। प्रयोग, analogues, मूल्य लागि निर्देशन
क्रिस्टिना र उनको प्रेम Shemetova
एक रोटी मिसिन प्रयोग स्ट्रबेरी देखि जाम (बाक्लो) कसरी तयार